Mirc မချိတ်တတ်လို့ပါ - MYSTERY ZILLION
January 2010 edited October 2010 in Internet & Email
ကျွန်တော် ရုံးမှာ MIRC သုံးချင်လို့ဗျ။အဲဒါ မချိတ်တတ်လို့.ဘယ်လိုချိတ်ရလဲ သင်ပေးကြပါဗျာ။
softwar ကို အရင်ဆုံး Install လုပ်
mirc ကို ဖွင့်
ဖွင့်ဖွင့်ခြင်းကို micr option ဆိုတာ ပေါလာလိမ့်မယ်
server ဆိုတဲ့ထဲကို သွား
description ဆိုတဲ့နေရာမှာ ygnchat ထည့်
IRC Server မှာ hardcore.myanmarlinux.org ဆိုတာဖြည့်
Port မှာ 443
ပြီးပြီ add ဆိုတာနဲ့ ပြန်ထွက်
select ဆိုတာ ကလစ်ပေး
ကျွန်တော် အစ်ကိုပြောတဲ့အတိုင်း ချိတ်တာ ဒီ error တက်နေတယ်ဗျ.။
ကူညီပါအုံးAttachment not found.
အကိုရေ.....MIRC Options Box ပေါ်လာရင်.....Connect မှာတော့ ဖြည့်တက်မှာပေါ့
servers မှာ အပေါ်က အကို ပြောသလိုထည့် လိုက်ပါ...
Options မှာ ..Default Port: 443 ထားလိုက်ပါ.....
Local Info မှာ... IP Address: မှာ IP address ထည့်ပါ... MPT ဆိုရင်... 203.81.72.200 ထည့်ရတယ်
Identd ကတော့ အဲဒီအတိုင်းပဲ
Firewall မှာ...Firewall support: မှာ Both ကို ရွေးပေး၊ Protocol: မှာ proxy ကိုရွေးပေးပါ....hostname: မှာခုနလိုပဲ ... MPT ဆို 203.81.72.200 ထည့်ပေးလိုက်ပါ....port ကတော့ 8080 ပေါ့...
ပြီးရင် Connect ကိုပြန်သွား ပြီး... connect to server (သို့) connect ကို နိုပ်လိုက်ပေတော့ ဗျာ....
ကဲ အဆင်ပြေစွာ... ချက်နိုင်ပါစေ....
Where can i download mIRC chat with crack?
MIRC က Crack လုပ်စရာမလိုပါဘူး ဒီတိုင်းသုံးလို့ရပါတယ်
mirc install လုပ် ဖွင့်လိုက်.... nick name တစ်ခုပဲရိုက်လိုက်....
ပြီးရင် /server hardcore.myanmarlinux.org ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက် ... တန်း connect ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်..... နောက်တစ်ခါ ပြန်ရိုက်ဖို့လည်းမလိုဘူး.....
၀င်သွားပြီဆိုရင် /list နဲ့ကြည့်.... ဘယ် channel မှာလူဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုး.... လူများတဲ့ထဲကို ၀င်ချင်ရင် double click လုပ်လိုက်ရုံပဲ.....
နောက် nick name ပြန်ပြောင်းချင်ရင် /nick နဲ့ပြောင်းလို့ရသေးတယ်....
ကျန်တဲ့ ဟာတွေတော့ ပြောတော့ဘူး အသုံးမလိုဘူးထင်လို့ ...